IiTattoos ngeedragons, entshona okanye empuma? | Ukuzoba
IiTattoos ngeedragons, entshona okanye empuma?
Nat Cerezo | | Iimpawu zeTattoos
Yonke into ingcono nenamba, utsho umyeni wam. Kwityala lakhe unezikipa ezineedragons, amanani egongqongqo, iiggs zebhiya ezinamadragoni, iincwadi zeedrako, imidlalo yebhodi kunye needragoni, iiposta zenamba ... kwaye akakwazi kulala ngaphandle kwezinyo elincinane, isilwanyana sakhe esasifakwe inamba. Kungenxa yoko le nto yayingumcimbi wexesha ngaphambi kokuba acinge ngokuba Iitattoo ezineedragons.
Kodwa, Ukuba uyazithanda ezi zilwanyana zinomtsalane, akukho lula kangako ukuba uphefumlelwe Iitattoo ezineedragons. Ngapha koko, umbuzo wokuqala oza engqondweni unombuzo wangaphambili. Ngaba siye sayila idrako yasentshona okanye esempuma? Siza kuzihlalutya zombini apha ngezantsi.
1 Inamba yasentshona, inyoka enamaphiko
2 Inamba yasempuma, ubulumko obudadayo
Inamba yasentshona, inyoka enamaphiko
Ubudlelwane phakathi kweentlobo ezimbini ezinkulu zenamba (entshona nasempuma) bunomdla kakhulu, kuba, nangona ikakhulu zichasene, zinamanqaku ngokufanayo.
Okokuqala, Inamba yasentshona yavela kwiintsomi zakudala zamaGrike, kwaye ikhawulwe njengesigebenga. Iphefumlelwe zizirhubuluzi ezinkulu, ezinje ngeengwenya, iingwenya okanye iinyoka, iidragons zaseNtshona zinamaphiko, ziphefumla umlilo kwaye azikho mhle kakhulu. Zisetyenziswe kumabali aliqela njengobume bobubi (njenge-apocalypse) ekufuneka iqhawe liyibulale ukuze izisindise kunye nabathandekayo bayo.
Inamba yasempuma, ubulumko obudadayo
Endaweni yoko, inamba yasempuma ichasene. Inemvelaphi yayo e-China, abanye bathi kwii-totems ebezimelwe kuzo kwezinye izizwe, ezinokuthi zithethelele ubume bazo obude. Nangona umzimba wabo ufana nenyoka, iidragons zasempuma zineempawu eziphefumlelwe zezinye izilwanyanaNjengeempondo zexhama kunye neentshebe zekatfish. Kananjalo, baphantse bangabinamaphiko.
Kwiinkcubeko zasempuma, ekugqibeleni, iidragons azinazo iintsingiselo ezimbiNgokuchasene noko: zizilwanyana ezimele izinto zendalo, zilungile kwaye zilumke kakhulu.
Siyathemba ukuba eli nqaku kwiitattoos ezineedragons likuncede ekukhuthazeni kwii-tatoos ngeedragons. Khawusixelele, uyazithanda ezi tattoos? Ngaba uyazi ukuba umahluko phakathi kweentlobo ezimbini zeedragons? Shiya iikhomenti!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iimpawu zeTattoos » IiTattoos ngeedragons, entshona okanye empuma?
I-tattoo kwi-instep, uyilo olubonakala luhle
Amatato amancinci, aqondayo kunye nenhle yesebe